Fused silica ကြိတ်စက်, တရုတ်ကြွေကြိတ်စက်, Kamroller, ဖျူး silica ထုတ်ကုန်များ - Kamroller
Glass ကိုဒေါသ roller
Kamroller Glass ကို Annealing ကြိတ်စက်
အရည်အသွေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်သိသိသာသာ sulfate ၏စုဆောင်းခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချကသံမဏိ roller နဲ့နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ဖန်၏အရည်အသွေးအတွက်တိုးတက်မှုနှင့်အပိုင်းအစနှုန်းမှာတစ်ဦးလျော့ချရေးအောင်မြင်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ fused silica roller အနေနဲ့အလွန်အမင်းနိမ့်အပူစီးကူးရှိပြီး microcracks နှင့်အနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ပင်ဖန်ဖဲကြိုးမပါဘဲအနိမ့်ပုံပျက်သောဖန်အားဖွင့်, အ annealing ဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ·ချောမွေ့မျက်နှာပြင်, သံဖြူသို့မဟုတ်ဖြူအောက်ဆိုဒ်အဆိုပါ fu ဆက်ဆံဖို့လွယ်ကူပါတယ် ...
ဆီလီကွန်သံမဏိအောက်ခြေ annealing roller
အရည်အသွေးမြင့်မားဆီလီကွန်သံမဏိစာရွက်ထုတ်လုပ်မှုဆီလီကွန်သံမဏိ annealing roller များတွင်အသုံးပြုထိုကဲ့သို့သောသံမဏိကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ် annealing ဖြစ်စဉ်များတောင်းဆိုများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဆီလီကွန်သံမဏိစာရွက်၏စစ်ဆင်ရေး annealing သယ်ဆောင်ရန်သုံးခြင်းနှင့်အပူချိန်အကွာအဝေး 600-950 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ roller စားပွဲပေါ်မှာချောမွေ့ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးပို့သေချာ, လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နှင့် Kamroller ရဲ့စီးပွားဖြစ်မူပိုင်ရိုးတံအဆုံးနည်းပညာကိုနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုသည်။ ထိုအခါမျက်နှာပြင်, r ...
မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ anneal များအတွက် Fused silica ကြိတ်စက် ...
မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများတွင် Kamroller တိကျစွာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်ပေးထားပါတယ်။ ကြောင့်မြင့်စက်မှုခွန်အားနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့်ကြွေထည်၏လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိ, မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူများနှင့်မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်သူမှ ပို. ပို. ကြွေပစ္စည်းများအစားသတ္တုသုံးပြီးနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြမ်းခံများနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပေါ့ပါးမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ t ကိုထုတ်လုပ်မီးဖိုနှင့်မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများနေမှုကိုချေဖျက်ဘို့ roller ထောက်ပံ့ ...
Fused silica ဟင်းပွဲများ
KAMROLLER flat Arch ထုတ်ကုန်များ
Glass ကိုဒေါသ roller စီးရီး
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖျူး silica ကုန်ကြမ်း
KAMROLLER®အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင် 1988 ခုနှစ်ကတည်းကနည်းပညာမြင့်ကြွေထည်၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်, စက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကမ္ဘာတဝှမ်းဖောက်သည်အရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေး။
ရှန်ဟိုင်းလမ်း, ရှင့်ယိစီးပွားရေးဇုန် - နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်, Xuzhou စီးတီး, Jiangsu ပြည်နယ်, တရုတ်
6:00 pm တွင်ရန် 9:00 pm တွင်ထံမှ7နေ့ရက်များတစ်ပါတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် pricelist အကြောင်းကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့ကိုသင့်အီးမေးလ်ထားခဲ့ပါကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့ကို 24 နာရီအတွင်းထိတွေ့ပါလိမ့်မည်
ကုန်ပစ္စည်းများလမ်းညွှန် - အသားပေးထုတ်ကုန်များ- ပူ Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း